Sarkaal sare oo Al-Shabaab looga dilay Soomaaliya | KEYDMEDIA ENGLISH
Sarkaal sare oo Al-Shabaab looga dilay Soomaaliya
Ibraahim Maclin Cabdi ku magacdheer "Ibraahim Ganey" ayeey Maanta Ciidanka ku toogteen Meel 45km dhanka galbeed kaga beegan magaalada Baydhabo.
BAYDHABO, Soomaaliya - Ciidanka Xoogga Dalka iyo kuwa Maamulka Koonfur Galbeed ayaa shan ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, oo uu ku jiro hoggaamiye sare ku dilay howlgal military, sida uu xaqiijiyay sarkaal sare.
Howlgallada ka dhanka ah xagjiriinta ee ka socda Bardaale, oo ah magaalo ku taalla Koonfurta Gobolka Baay, ayaa daba socday macluumaad ay Ciidanka ka heleen dadweynaha, ayuu yiri Maxamed Isaaq Cali, guddoomiyaha magaalada.
"Waxaa jiray iska hor imaad adag oo u dhaxeeyey Ciidanka iyo Al-Shabaab, laakiin waan ka awood roonaanay, waxaan dilnay shan kamid ah, oo uu kamid ahaa Ibraahim Macalin Cabdi, oo ahaa hogaamiye sare oo qaabilsanaa howlgalada magaalooyinka Qansax dheere, Bardaale iyo Awdiinle," ayuu yiri gudoomiyaha.
Wuxuu sheegay in Ciidanka ay xoojin doonaan howlgalada ka dhanka ah Al-Shabaab-ka ku dhuumaaleysanaya magaalada iyo degaanada kale ee katirsan gobolka Baay, Koonfurta Soomaaliya.
Gobollada koofureed ee Soomaaliya waxaa ka socda dagaal u dhaxeeya Ciidamada dowladda iyo Al-Shabaab tan iyo markii xagjiriinta laga eryay magaalada caasimada ah ee Muqdisho, bishii August ee sanadkii 2011.
Comments Topics: alshabaab amisom dagaal koonfur galbeed